K: ယူနီ…တူညီ .. မူအတည်ဖြစ်ဖို့…
ဘလော့ဂါ ညီမလေး တစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ ငါတို့ မြန်မာတွေကလည်း စာလုံးဖွန့်လေးတောင် ညီညွတ်အောင် မသုံးနိုင်ကြ ဘူးနော် တဲ့။ အင်း… လို့ပဲ သံရှည်ဆွဲပြီး ထောက်ခံသလိုလို စဉ်းစားသလိုလို လုပ်လိုက်ပါတယ်။ တကယ်က ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အဖြေကို မသိလို့ပါ။
ပြန်စဉ်းစားမိတော့ အားလုံးနီးပါး ဇော်ဂျီ ဖွန့် (စာလုံးပုံစံ) ကို သုံးနေကြသားပဲ။ ညီညွတ်သားပဲလို့ … အခု ရေးတဲ့ စာကိုတောင် ဇော်ဂျီဖွန့်နဲ့ပဲ ရိုက်လိုက်တာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ အိုင်တီပညာရှင် အများစုက တညီတညွတ်တည်း ပြောကြတာ ကတော့ ဇော်ဂျီဖွန့်ဟာ ယူနီကုဒ် ကို အပြည့်အ၀ အသုံးချထားတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် မသုံးသင့်ဘူးတဲ့။ ယူနီကုဒ် ကိုပဲ အပြည့်အ၀ အသုံးချတဲ့ မြန်မာဖွန့်ကိုပဲ သုံးသင့်သတဲ့။ ဒါနဲ့ သူတို့ ညွှန်းတဲ့ ယူနီကုဒ် ဆိုတဲ့ ဖွန့် တွေကို ကွန်ပျူတာမှာ သွင်းပြီး သုံးဖို့ ကြိုးစားကြည့်တဲ့ အခါမှာ အရင်က အဆင်ပြေပြေ ဖတ်လို့ရနေတဲ့ စာတွေလည်း ဖတ်လို့ မရတော့ပါဘူး။
နောက်တခါ အိုင်တီသမားတွေက ပြောပါသေးတယ်။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် ကို တညီတညွတ်တည်း သုံးနိုင်ဖို့က ၉၀ ရာနှုန်း အောင်မြင်နေပြီတဲ့။ ဒါဆိုလည်း ကျန်တဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်က ဘာလိုနေသေးတာလဲ…။ အဲဒီ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လိုနေသေးလို့ ယူနီကုဒ် ဆိုတာကို သုံးတဲ့အခါမှာ ခုနလို အဆင်မပြေတာတွေ ပေါ်လာတာလား။ ဒါဆိုရင် ကျမတို့လို သာမန် အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်မှပဲ ယူနီကုဒ်ကို သုံးလို့ရမှာလား။ ခုလက်ရှိမှာ အဆင်အပြေဆုံး ယူနီမကုဒ်တဲ့ ဖွန့်ကိုပဲ သုံးလို့ မရဘူးလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ ကျမတို့လို အိုင်တီပညာကို ထဲထဲဝင်ဝင် မသိတဲ့ သာမန် အသုံးပြုသူတွေ နားလည်ဖို့ အိုင်တီပညာရှင်တွေဘက်က လုံလောက်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေ ပေးထားတာ များများစားစား ရှာမတွေ့ ပါဘူး။
ကျမအမြင် ပြောရရင် သည်နေ့လို အင်တာနက် တွင်ကျယ်လာတဲ့ ကာလမှာ ကမ္ဘာ့ စံနှုန်းနဲ့ညီတဲ့ မြန်မာ စာလုံးပုံစံကို တညီတညွတ်တည်း အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အရေးဟာ မြန်မာ ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘားမားလို့ ပေါင်းမလား မြန်မာလို့ ပေါင်းမလားဆိုတဲ့ ကိစ္စထက်တောင် အရေးကြီးဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဲသည်တော့ ကျမအနေနဲ့ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူ မဟုတ်ပေမဲ့ ကမ္ဘာ့စံနှုန်းနဲ့ညီတဲ့ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ပညာရပ် စကားလုံးတွေ မသုံးပဲ သာမန် နားလည်အောင် ကြိုးစား ကြည့်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ အက္ခရာ စာလုံး တစ်ခုတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့် နေရာ တစ်ခု ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ပါပဲတဲ့။
အက္ခရာ တစ်လုံး ရိုက်တိုင်း သူ့အတွက် သီးခြား သတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ နံပတ်ကို ခေါ်ပြီး ဖော်ပြခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာစက်ကလည်း အဲဒီ သက်ဆိုင်ရာ နံပတ်ကို ကြည့်ပြီး ဘာ အက္ခရာ ဆိုတာကို နားလည် ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလို နားလည် မှသာ မြန်မာစာနဲ့ သတ်ပုံစစ်တာတို့၊ စက်နဲ့ ဘာသာပြန်တာ၊ အက္ခရာစဉ် စီတာ၊ စာလုံးပေါင်း၊ သဒ္ဒါအထား အသို စစ်ပေးတာ၊ စာရိုက်လိုက်တာနဲ့ ပုဒ်ဖြတ်၊ ပုဒ်ရပ်တွေ ခွဲထားတွေ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ ကွန်ပျူတာမှာ ဖော်ပြတဲ့ ခလုတ်တွေ၊ သတ်မှတ်ချက်တွေကို ကိုယ့်စာနဲ့ကို ဖတ်နိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ ဒါထက်ပိုရရင် ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ် အသုံးပြုတဲ့ မိုဘိုင်ဖုန်းတွေ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာ ကိုယ့်ဘာသာ စကားနဲ့ ဖော်ပြပေးနိုင်လာပါမယ်။ လက်ရှိ ကျမတို့ သုံးနေရတဲ့ မြန်မာစာ၊ တိုင်းရင်းသား စာတွေက ကွန်ပျူတာမှာ သာမန် စာစီစာရိုက်တဲ့ အဆင့် လောက်ပဲ ရှိနေပါတယ်။ ယူနီကုဒ် ဆိုတာကြီး ဖြစ်လာရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ စကားနဲ့ ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးတဲ့ လုပ်ငန်းရပ်တွေ လုပ်ဆောင် ခိုင်းစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
ယူနီကုဒ် နံပတ်တွေရဖို့ ကိုတော့ ယူနီကုဒ် ကွန်ဆိုတီယံလို့ ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူနီကုဒ် စံ သတ်မှတ် တဲ့ အဖွဲ့ကြီးမှာ လျှောက်ထားရပါတယ်။ လျှောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံအလိုက်၊ ဘာသာစကား အလိုက် တင်ပြ လာတဲ့ ဘာသာ စကားတွေကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံက စာပေပညာရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ပြီး၊ ယူနီကုတ်စံသက်မှတ်တဲ့ အဖွဲ့ကနေပြီး ကုဒ် နံပတ်တွေ သတ်မှတ် ပေးပါတယ်။မြန်မာ ယူနီ ကုဒ် စနစ်ဟာ မြန်မာစာ တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပဲ အခြား တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား တွေပါ ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ပေးရ မှာပါ။ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ အတွက် စနစ် တစ်ခုသာ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ သတ်မှတ်ချက် ကြောင့်ပါ။ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် လျှောက်ထားခဲ့လို့ မြန်မာစာ အတွက် အတော်ပြည့်စုံ နေတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေပြီး၊ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေ အတွက်ပါ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သတ်မှတ်နေတဲ့ အဆင့်မှာ ရောက်နေပြီ လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို သတ်မှတ်ချက် ရရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး၊ ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေက သတ်မှတ် ထားတဲ့ ကုဒ်နံပတ်တွေကို နားလည် လက်ခံဖို့ နဲ့ ပုံစံတကျ မြန်မာစာလုံးတွေ ပေါ်လာဖို့ လိုပါ သေးတယ်။ အဲဒီအဆင့်မှာ မြန်မာစာ စနစ်ကို ကွန်ပျူတာမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် ပေါ်လာအောင် အလုပ် လုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကို ကြားခံလုပ်ဆောင် ပေးမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် တစ်ခု ရှိရပါမယ်။ လက်ရှိ မြန်မာစာ သုံးနိုင်တဲ့ ဖီဒိုရာ - လင်းနက်စနစ် (Fedora – Linux OS)၊ အခု နောက်ဆုံးထွက် ပန်းသီး မက်စ်အိုအက်စ် အိတ် (Mac OS X Lion) မှာ မြန်မာ ယူနီကုတ် ပါရှိ ပါသတဲ့။ အခု ပြောခဲ့တဲ့ စနစ်တွေကို ကျမတို့ မသုံးနိုင်တာရယ်၊ မသုံးတတ် တာရယ်ကြောင့် အများပြည်သူ အတွက် မကျယ်ပြန့်နိုင်ပါဘူး။
အကယ်၍များ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်လို ကုမ္ပဏီက မြန်မာစာစံ သတ်မှတ်ချက် စနစ်ကို လက်ခံပြီး အဲသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကို လုပ်ဆောင်ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး အတွက် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကမ္ဘာမှာရော မြန်မာမှာပါ အသုံးပြုသူ အများဆုံး ဖြစ်တဲ့ ၀င်းဒိုးစနစ် (Windows OS) ကို သူတို့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်နေလို့ပါ။ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်က လက်ခံပြီ ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကုမ္ပဏီ တွေကလည်း လက်ခံလာကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာ စာမျက်နှာတွေကို ဖန်တီးထားသည်ဖြစ်စေ မြန်မာစာကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ လက်ကွက် ပုံစံနဲ့ရိုက်ပြီး တညီတည်း ပေါ်လာ ခိုင်းတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက်၊ ဘယ်ကွန်ပျူတာ သုံးသုံး မြန်မာစာကို ဖတ်ဖို့ ဘာမှ အလုပ်ရှုပ် နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ စာရိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း မြန်မာစာ လက်ကွက် ပုံစံသိရင် ဘယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကနေ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်လာနိုင်ပါမယ်။ စာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်း ခုလို ဇော်ဂျီဖွန့် နဲ့ ရိုက်ထားတာတွေကို တချို့နေရာတွေမှာ ဖတ်လို့မရပဲ လေးထောင့် အတုံးလေးတွေပဲ ပေါ်နေတာမျိုးတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ မြန်မာစာကို ကွန်ပျူတာမှာ ရိုက်တော့မယ် ဆိုတာနဲ့ အဆင့်တွေ အများကြီး လုပ်ဆောင်ရပါပြီ။ ကိုယ်သုံးမဲ့ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာဖွန့် သွင်းထားမှ ရိုက်လို့ရမယ်။ ဖတ်မဲ့စက်မှာလည်း မြန်မာဖွန့်ရှိမှ ဖတ်လို့ရမယ်။ ရှိလို့ ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တောင် မြန်မာဖွန့်ပုံစံကိုရွေးရတယ် ပြောင်းရတယ်။ သည်ဘက်ကွန်ပျူတာကနေ ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာကိုရွေ့လိုက်ရင် ကိုယ်ရိုက်ထားတာတွေ ကို ပြန်ဖတ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲမှာတောင် နဂိုရှိပြီးသားစာရိုက်ထားတဲ့ဖိုင်တစ်ခုကို ပြန်ဖွင့်ရင် နဂိုအတိုင်းပြန်မပေါ်တတ်ပါဘူး။ ဖွန့်ကို ပြန်ပြန် ရွေးနေရပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ဒီဇိုင်းနာ တစ်ယောက် ကတော့ မြန်မာစာနဲ့ လုပ်ရတာ သိပ်လက်ပေါက်ကပ် တယ်၊ ဒီဇိုင်းပုံစံ တခု ပြောင်းတာနဲ့ အစ၊ အဆုံး ပြန်ပြန် စီနေရတဲ့ ဘ၀ ဘယ်တော့ ကျွတ်မလဲလို့ ငြီးလေ့ ရှိပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ကို တညီတည်း အသုံးပြု လာနိုင်ရင် အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေ မှာလည်း သိချင်တဲ့ အချက်အလက်ကို မြန်မာလိုရိုက်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ရှာနိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ အခုတော့ ဇော်ဂျီ ဖွန့် နဲ့ ရှာရင်၊ မြန်မာ၃ ဖွန့် က မသိ၊ ဧရာနဲ့ ရှာရင် ဇော်ဂျီက မသိဆိုတော့ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
ဒါဆို အခု အရေးကြီးတာက မိုက်ကရိုဆောဖ့် ကုမ္ပဏီက မထည့်သွင်း ပေးသေးလို့ မြန်မာစာ ယူနီကုဒ်တွေ အလုပ်မဖြစ် သေးတာပေါ့။ သူတို့ က လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ရေးပေးအောင် ဘာလုပ် ပေး ဖို့ လိုမလဲ လို့ မေးမြန်းကြည့်မိတဲ့အခါ…. သည်လို ကိစ္စမျိုးမှာ အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက ကုမ္ပဏီကို တောင်းဆိုမှ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။ တနိုင်ငံလုံး သုံးဖို့စနစ် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေကြေးရင်းနှီးမှု အများအပြား သုံးရမှာပါ။ အစိုးရတွေ ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင် လုပ်ရတဲ့ စီမံကိန်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ သာမန် သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ တတ်နိုင်တာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီနဲ့ စကားပြောဖို့ အစိုးရပိုင်းကို ဒါမှမဟုတ် သည် ကုမ္ပဏီ အပေါ်မှာ သြဇာ ရှိမဲ့သူ ပုဂ္ဂိုလ်ကို အကူအညီတောင်းဖို့၊ လိုပါလိမ့်မယ်။
မစ္စတာ ဘီလ်ဂိတ်နဲ့ မစ္စတာ ဘော်မာ သို့ ဦးတည်ပြီး မိုက္ကရိုဆော့ဖ် စနစ်မှာ မြန်မာစာ စနစ် လက်ခံ ထည့်သွင်းဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုတဲ့ စာမျက်နှာ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ( http://petition.myanmarlanguage.org/ ) ဒီနေရာ မှာ လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုထားသူ ပေါင်းဟာ သည် စာရေးချိန် အထိ စုစုပေါင်း တစ်သောင်း သုံးထောင်ကျော်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးသူ ၅ သိန်း (မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူ ၅ သိန်း ရှိရင်) မိုက္ကရိုဆော့ဖ်က မြန်မာစာ စနစ်ကို လက်ခံ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း တနည်းတလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပါဝင် တောင်းဆို လက်မှတ်ထိုး သင့်ကြ ပါတယ်။
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တဲ့ အချက်ကြောင့် မိုက္ကရိုဆော့ဖ်က မလုပ်တာ ဆိုခဲ့ရင်တော့၊ လူသားချင်း စာနာမှု အမြင်က ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ သန်း ၆၀ လူဦးရေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ နည်းပညာ အဆင့်မြင့်ဖို့ အကူအညီ ပေးခြင်းအားဖြင့် သာမန် လူတန်းစားနဲ့ နည်းပညာ နီးစပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးတာပါ။ လူထုကို တိုက်ရိုက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။
အဓိက တာဝန်အရှိဆုံးကတော့ အစိုးရပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် အစိုးရကတော့ အာဆီယံ ဥက္ကဌ ဖြစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးနေတယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ရေးတာ တစ်ယောက် အလွယ်တကူ ဖတ်မရရင် ပိုတောင် ကောင်းသေးတယ်လို့ ထင်နေလားတော့မသိပါ။ ဒါမှမဟုတ် နည်းပညာ တိုးတက်မှုဟာ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတာကြောင့် အစိုးရက ငွေကြေး မစိုက်ထုတ်တာလား၊ သူတို့ အိပ်ထဲမရောက်မဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ အတွက် မသိချင်ယောင် ဆောင် နေကြ တာလား ဆိုတာတော့ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါမယ်။
နောက်တချက်က တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကန့်သတ်တဲ့ အစိုးရ တစ်ရပ် အနေနဲ့ ယူနီကုဒ် စနစ် မရှိနေတာကို ပိုကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ယူနီကုဒ် စနစ် အလုပ်လုပ်လာရင် တိုင်းရင်းသား ဘာသာ စကားတွေ ကို အရင်ကလို ကန့်သတ် ပိတ်ပင်နိုင်တော့မယ် မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့် မိခင်ဘာသာ စကားကို အဆင့်မြင့် နည်းပညာနဲ့ တွဲဖက် သုံးနိုင်လာရင် လူတွေ နည်းပညာနဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးလာစေမှာ ဖြစ်သလို၊ စာပေ ဖွံ့ဖြိုးမှုလည်း တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ အိုင်တီနည်းပညာ အပြောင်းအလဲဆိုတာ လူမှု တော်လှန်ရေး တစ်ရပ်ဖြစ်သလို ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လည်း များစွာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမဲ့ အရေးကြီး ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။
ယူနီကုဒ် စနစ် ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်လာတဲ့ တနေ့ ၊ ရွာက လယ်သမားကြီးတွေလည်း သူတို့အိမ်က ရုပ်မြင်သံကြားစက် မှာ လုပ်ဆောင်ချက် တွေ မြန်မာစာ နဲ့ ဖတ်ရှု အသုံးပြုလာနိုင်မှာပါ။ ဒီ မျှော်လင့် ချက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ကိုတော့ ဘာသာဗေဒကျွမ်းကျင်သူ မြန်မာ ပညာရှင်၊ တိုင်းရင်းသား ပညာရှင်တွေနဲ့၊ နည်း ပညာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ အစိုးရ နဲ့ မီဒီယာတွေကပါ ၀ိုင်းဝန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ် နေပါတယ်။ မြန်မာစာ ယူနီကုဒ်စနစ် အသုံးပြုနိုင်ရေးဟာ အရေးကြီးကြောင်း ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူ သာမန် လူတွေကိုလည်း နားလည်အောင် ပညာပေးဖို့ လိုသလို သက်ဆိုင်ရာ မိုက္ကရိုဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီက လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလာအောင် တိုက်တွန်း နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို လေ့လာကြည့်မိတဲ့အခါ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း သူ့ဘာသာ စကားကို ယူနီကုဒ်နဲ့ သုံးနေတာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ကျော်သွားပါပြီ။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလည်း ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်နေပါပြီ။ သူတို့ဘာသာ စကားတွေနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ သုံးနိုင်ကြပါပြီ။
တကယ်လို့သာ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်လို ကုမ္ပဏီကြီးမျိုးက မြန်မာ ယူနီကုဒ်စံ ကို သူ့ရဲ့နောင်ထွက်လာမဲ့ ၀င်ဒိုးမှာ ထည့်သွင်းပေး လိုက်ရင် ခုလို တကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာဖွန့်တွေလည်း ယူနီကုဒ် စနစ်အောက်မှာ မညီညွတ်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ် စံညွှန်းအတိုင်း လက်ကွက်ဆင်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ စာလုံးပုံစံ အမျိုးမျိုးကတော့ တီထွင် ဖန်တီး မှုအလိုက် ပေါ်လာမှာပေါ့လေ။ ဒါကတော့ ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို မညီညွတ်တာလို့လည်း သတ်မှတ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါမျိုးကတော့ မတူကွဲပြားခြင်းရဲ့ အလှတပါးပဲ ဖြစ်လာမှာပါ။
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်
Labels: bits of thought , Blogging , မိတေဖိုး
Million of thanks for sharing this Ma. Whatagreat article! It gives usalot of Info about Unicode.
See, now I couldn't type in mm font cos of some technical issues in my computer :D Well, it's suchahigh time to take necessary actions...**sigh**
"ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို လေ့လာကြည့်မိတဲ့အခါ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း သူ့ဘာသာ စကားကို ယူနီကုဒ်နဲ့ သုံးနေတာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ကျော်သွားပါပြီ။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလည်း ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်နေပါပြီ။ သူတို့ဘာသာ စကားတွေနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ သုံးနိုင်ကြပါပြီ။ "
မြန်မာ က... နှေးပျော့ .. နေသေးတာပေါ့ ..